Dulkree 17.09.2021 17.09.2021
Pamba pedu paigara imwe couple yainge iri yechidiki i think vainge vachangobva kutoorarana I think vainge vari around 25years old. Murume wacho aiwana mari since ainge ari mukorokoza saka vainge vane about 2 months vachigara pamba pedu. Mai future ndiko kudeedzwa kwavaiyita namoms most of the time vaisara vega since murume wavo aigona kuenda kubasa kwake for almost 2 weeks asina kudzoka. Ndaingonzwa vanhu vachiti mumadzi ane nhumbu anonaka asi since ndainge ndichiri kuchikoro ndaizomirira kuti nditange ndaroora.
Mai future munhu aifara and murume wavo paanenge asipo vaipota vachitamba neni vachiti kuna momz uyu ndiye murume wangu chaiye since ndaivabatsira almost everything zvavanenge vakumbira. Momz yangu yaibva yangoseka zvayo. Nemumwe musi murume ainge aenda 2 weeks ndokubva afona musi g kudzoka akati aizodzoka after rimwe week, izvi zvakabhowa mai future asi havana zvavaigona kuita since murume ainge arikubasa.
Ndakadzoka kuchikoro mumwe musi ndikaona munhu akasuwa so ndichibva ndabvunza kuti nhai mukadzi wangu ko sei kutsamwa, vakapindura kuti baba future havasi kudzoka this week apa ndane 2 weeks ndisina kusvi…… haaa sorryhf ndafunga kuti ndirikutaura nemunhu mukuru.
Ndakaseka zvokuti, ndichibva ndati aah hapana zvandisingazive apa I am sure ndakatombomitisa adi vasikana vacho havana kuzouya nevana vangu, tese tichibva taseka ko ndaida kuti vasekerere and to cheer her up.
Ndakaona munhu akutofara achibva atanga kujoka neni achiti aah kana vasina kuuya pamwe hauna kunyatsovasvira. Kubva musi iwoyo tainge takuflirta pese patinotaura???
Ndakapinda mumba pandakabuda mai future vainge vapinda mumba mavo then vakabva vandideedza vachiti she wanted help. Ndakapinda mumba mavo vachibva ndaona vaisa food patable ndokudeedzera kuna momz zvikanzi murume wangu arikudya kuno nhasi.
Tapedza kudya paye akabva akuti nhasi urikurara kuno ndikabva ndati aah mai future murikuda kutanga zvinhu zvamusingazogone kupedzisa achibva ati ndakakuudza kuti urimwana kare wani.
Ndakabva ndati kana ndikakusvirai hamuzode kuona baba future. Mai future vakaseka ndokubva ndati regai ndidzokere mumba I am sure varikunditsvaga. Ndakaenda kunogara mumba then ndokubva ndazobuda ndichienda kuroom kwangu yainge iri close to door rekubuda panze about 2 rooms kubva pabedroom yamai future. Ndainge ndakatorara zvangu apa dzainge dzava kuma pm ndikanzwa door rangu richivhurwa wanike ndimai future since ndainge ndisati ndabatwa nehope vakabva vanditi huya kuno titandare ndirikushaya hope.
Ndakambonyara kumuka since ndainge ndakapfeka kaboxer ndikafunga kuti pamwe munhu achabuda, asi vakaramba vakamira zvikanzi huya kani. Ndakamuka ndakadaro apo ndichifamba mboro yangu yayioneka kuti yakamira zvishoma but pandikazopinda mumba mavo pfungwa dzainge dzatomhanya kare apa mboro yanga yamira kuita kunge simbi yakatosimudza bhurugwa.
Mai future vakazviona zvekuti pandikagara pabed yavo ivo vakamboramba vakamira apa vainge vakapfeka night gown vakarisunga. Zvakazoitika handina kunge ndazvifungira, mai future vakasunungura night own riya vachibva varidonhedza pasi kusara vari musvo apa chidumbu chavo chainge chakakura zvekuti vaitadza kuona zvigunwe zvavo. Vakabva vanditi nhasi ndiwe murume wangu chaiye, ndakangoramba ndakavhura muromo nefushamisika but ndakazviti izvi zvauya zvega ndinorambirei plus zvinonz mukadzi ane nhumbu unofanirwa kumupa zvaanenge akumbira.
Panguva iyoyo ndakabva ndasimuka ndichibva ndabvisa boxer rangu ndaitotya kuti pamwe ndinovatsambirira ndikakudza mwana but ivo vainge vakangwara vainge vaverenga mapositions anoitwa nevanhu vane nhumbu and vaida kuita try neni. Mai future vainge vakatota kare hameno pamwe zvinokonzerwa nenhumbu handizive asi iwe ndainge ndakuda kusvira mukadzi wemunhu apa ainge akazvitakura futi.
Ndaidawo experience saka handaizoramba ipapo. Mai future vakamborara zvirinormal ndikazama kuuya pamusoro pavo but ndaingotya saka ndipo pavakati pane zvandamboverenga ngatizame izvozvo. Vakabva vauya paEdge yemubhedha so inini ndakamira pasi ndakaita kakubhenda so ha beche richibva rabudikira zvishoma ndichibva ndaipinza ndokutanga kukoira aaah aaah mhani mukadzi ane nhumbu anonaka vakomana.
Ndayikoira ndichitya asi ndakabva ndadhonzwa magaro vachiyita chikapa vachitambisa magaro so haa mhani…. Takazoita imwe position yekudza papillow pabed iv vachibva vanyura ndichibva ndawana mukana wekukoira, ndokuita zvakare side by side ndakaita kupihwa magaro ese , ndati mukadzi ane nhumbu anonaka… Takazopedzisira ivo mai future varipamusoro haa ndakaitirwa chikapa chakapenga tichibva tatundirana.
Ndakaona kuti iyi ndiyo position yavaifarira since vainge vari in control and relaxed….
Let us examine different regions in Zim toona ku vakadzi in general vakamira sei. Vakadzi kana muchida pinduraiwo indicating kuti varume vemarudzi akasisiya vanoita sei pakusvirana 1 Ndotanga neku Binga chaiko kune maTonga. Munozviziva here kuti vakadzi ava ndivo vakatanga kukwira pamusoro pevarume reverse missionary position. Vazhinji vacho vanochemerera isati yapinda, kana vavakutunda voridza mhere chaiyo.
Sandi kunaka ikoko. Havanyare kana vanzwa nezemu. First sign yavo kugara beya. Dunhu rese kubva kwaMurehwa kuno bata KuuZumba ndiko kumusha kwechinamwari. Infact kuphuurira kuno svika kuMalawi chaiko. Vamwe vachiri kupfeka chuma. Kana uchisvirana neMutoko unototanga wadya zvakakwana. Vakadzi vazhinji vakatakura matinji marefu anodonzwa pahumhandara.
Matinji marefu hanyanyonakidza kudya nekuti rurimi rwunogona kutadza kusvita pagongo chaipo. Asi kutamba nawo nezvigunwe unonakirwa. Havatane kuritotesa. Pozoita rusero. Vanokupepeta ukarasirwa uko. Zvinotoda vakashinga, hasvindi zvipwere zvinotunda after 5 minutes. Kana wakaroora wotopota uchigutsa mukadzi, kutosvira everynight , otherwise havamirire izvozvo.
Vanokusiya wakara vachikwirwa mugarage chaiomo. Overall vanogona kusvirisa svese nekutamba nemurume. In other words vane sexy appeal. Parunako ndiko kune ma 1. Kana uchifarira dako hokoyo paBulawayo. Pakupfekasve ma 1. Asi pakuda mariwo i 1. Wotosimba homwe kanawadanana nemuNdebele. Hamheno kana makamboona vakadzi vane magaro mahombe anenge akaita zvekuremberera.
Vozoita mahips akabudira. Shape yacho inenge zingizi, ndiko kwavanobva ikoko. Vakadzi vanoda mboro ivavo. Ndivo vakatanga zvekunanzva mboro. Havana basa nemari kuphuura vakadzi vese vemuZimbabwe. Chikuru kvavari kuwana wekusvirana naye. Hamheno akavadzidzisa zvekusunga mbira dzakondo kana vave kutunda, kana usingagone, kana kuti uine kamboro kasina kwakanoenda vanokutyora musana wasungwa nemakumbo.
Vakadzi vazhinji havapheke maBraa, vanongofamba vasina. Makorekore havanyare kutaure zvinonyadzisira, kubvira kuchembere chaidzo. Ndiko kumusha werunyoka. Vazhinji vanobviswa virginity nanababa. Unotongwarira, otherwise ukango isa musikana wotoziva kuti unomuroora. Foreplay yacho yakapenga.
Vanoziva zvino ita turn on murume, apa inamba 1. Vane version yavo yechinamwari yekudya mushonga nekudonza magongo, kwete matidyi. Vazhinji vanemazikongo anenge tumboro chaitwo. Ukangati phee 2 minutes vanenge vaita orgasm, ndinofunga vanoita orgasm kana ka 10 kana uchigona kuzvibata kusatunda for 1 hr or more. Oh , ndiwo mapeche anonaka kunanzva iwayo. Kana uchiziva kuti unokurumidza wototanga waita rekunanzva, unonzwa makongo amira kunge kamboro kadiki. Vana vakadzidziswa kutaura zviri sexy ivavo.
Kuzoti kuyema. Zveshort time havazvide. Pakukisa kwega anasamanyika ishasha. Ini ndinofunga vanototunda nekisi yega kana uchinyatsogona zvekukisa izvi. Vazhinji vavo vanogona kuchengeta mazamu. Unowona kana ane vana three mazamu akamira kutwi kunge kamhandara.
Kana akarara ukaabata nekuyamwa unowona amira. Mari, baba mari ndichochihombe kwavari. Kana usina mari ungatorinyimwa beche. Vanoedza kukopa zvesezvese. Ukaburitsawo yakawanda unipihwawo rese.
Havana basa nemari kuphuura vakadzi vese vemuZimbabwe. Chikuru kvavari kuwana wekusvirana naye. Hamheno akavadzidzisa zvekusunga mbira dzakondo kana vave kutunda, kana usingagone, kana kuti uine kamboro kasina kwakanoenda vanokutyora musana wasungwa nemakumbo.
Vakadzi vazhinji havapheke maBraa, vanongofamba vasina. Makorekore havanyare kutaure zvinonyadzisira, kubvira kuchembere chaidzo. Ndiko kumusha werunyoka. Vazhinji vanobviswa virginity nanababa. Unotongwarira, otherwise ukango isa musikana wotoziva kuti unomuroora. Foreplay yacho yakapenga. Vanoziva zvino ita turn on murume, apa inamba 1. Vane version yavo yechinamwari yekudya mushonga nekudonza magongo, kwete matidyi.
Vazhinji vanemazikongo anenge tumboro chaitwo. Ukangati phee 2 minutes vanenge vaita orgasm, ndinofunga vanoita orgasm kana ka 10 kana uchigona kuzvibata kusatunda for 1 hr or more. Ohndiwo mapeche anonaka kunanzva iwayo. Kana uchiziva kuti unokurumidza wototanga waita rekunanzva, unonzwa makongo amira kunge kamboro kadiki. Vana vakadzidziswa kutaura zviri sexy ivavo.
Kuzoti kuyema. Zveshort time havazvide.
Pakukisa kwega anasamanyika ishasha. Ndakabata 9 inch mboro yangu ndokubva ndainangisa pabeche raChipo apa chandaida kuita kupomba beche rake ndikanzwa akuita kuchemerera apa makumbo ainge achiri mudenga.
Ndakaramba ndakabayirira mboro yangu mukati kati ndichinzwa hurume hwangu huchiita swim into beche raChipo apo iye ayinge ayita kundimbundira.
Takanozvambara tichinzwa kamunhuwi kekusvirana, takapedza week rese tichisvirana zvisingaite. Saturday yakasvika ndokubva ndayenda kunotora mukadzi wangu ku Airport, achisvika pandiri akandipa zikiss zvikanzi how was your week ndikati kukusuwa chete mudiwa wangu, zvikanzi did you look after Chipo ndikati as you instructed babe. Zvakabva zvanzi hapana chaaida here ndikati not sure, ndikaziva kuti vainge vazviplana, ndikati she did but ndakamubatsira kuwana zvaaida.
Mukadzi wangu akabva ati thanks I hoped kuti you would help her, Chipo akandiudza kuti aida kusvirwa since akapedzisira kusvirwa before asiyana nemurume wenyu. Ndakapinda mumba mavo vachibva ndaona vaisa food patable ndokudeedzera kuna momz zvikanzi murume wangu arikudya kuno nhasi.
Tapedza kudya paye akabva akuti nhasi urikurara kuno ndikabva ndati aah mai future murikuda kutanga zvinhu zvamusingazogone kupedzisa achibva ati ndakakuudza kuti urimwana kare wani. Ndakabva ndati kana ndikakusvirai hamuzode kuona baba future. Mai future vakaseka ndokubva ndati regai ndidzokere mumba I am sure varikunditsvaga. Ndakaenda kunogara mumba then ndokubva ndazobuda ndichienda kuroom kwangu yainge iri close to door rekubuda panze about 2 rooms kubva pabedroom yamai future.
Ndainge ndakatorara zvangu apa dzainge dzava kuma pm ndikanzwa door rangu richivhurwa wanike ndimai future since ndainge ndisati ndabatwa nehope vakabva vanditi huya kuno titandare ndirikushaya hope. Ndakambonyara kumuka since ndainge ndakapfeka kaboxer ndikafunga kuti pamwe munhu achabuda, asi vakaramba vakamira zvikanzi huya kani.
Ndakamuka ndakadaro apo ndichifamba mboro yangu yayioneka kuti yakamira zvishoma but pandikazopinda mumba mavo pfungwa dzainge dzatomhanya kare apa mboro yanga yamira kuita kunge simbi yakatosimudza bhurugwa.
Mai future vakazviona zvekuti pandikagara pabed yavo ivo vakamboramba vakamira apa vainge vakapfeka night gown vakarisunga. Zvakazoitika handina kunge ndazvifungira, mai future vakasunungura night own riya vachibva varidonhedza pasi kusara vari musvo apa chidumbu chavo chainge chakakura zvekuti vaitadza kuona zvigunwe zvavo.
thoughts on “Magaro anonaka”
Fenrizil on Magaro anonaka